मेयर साबको निर्देशनः बाहिर खुवाउँदा शोभनीय देखिएन, खुलामञ्चमा खाना नखुवाउनु ! Nepalpatra मेयर साबको निर्देशनः बाहिर खुवाउँदा शोभनीय देखिएन, खुलामञ्चमा खाना नखुवाउनु !
कात्तिक १८, काठमाडौं । अभियन्ता बद्रीप्रसाद ढुंगानाले खुलामञ्चमा हरेक दिन झण्डै दुई जनालाई निःशुल्क खाना बितरण गर्छन् । खाना खाने समूहमा कोरोना महामारीका कारण काम नपाएका र काम पाएर पनि खान धौधौ भएका मजदुरहरुको बाहुल्य हुन्छ । अशक्त र असहाय पनि हुन्छन् ।